အဘယျမေးခှနျးမြားကိုငါ့နိုင်ငံသားစမ်းသပ်မှုအတွက်တောင်းပါလိမ့်မယ်? | USAHello
သင်သည်သင်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်စမ်းသပ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ဆိုတော့နေကြတယ်? သင်သည်သင်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်အင်တာဗျူးအတွက်တောင်းပါလိမ့်မယ်အဘယျမေးခှနျးမြားထွက်ရှာမည်. သင်သည်သင်၏နိုင်ငံသားအဖြစ်စမ်းသပ်ရှောက်သွားနိုင်အောင်အားလုံးမေးခွန်းများကိုအဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်.
အဆိုပါနိုင်ငံသားစမ်းသပ်အင်တာဗျူးရှိပါတယ်3မေးခွန်းများကိုအမျိုးမျိုး:
မေးခွန်းတွေကဤသူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးအစားများကိုလည်းသင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်နေကြသည်, ဒါကြောင့်ရှင်းလင်းစွာဖြေကြားရန်ကြိုးစား. သငျသညျမေးခွန်းကိုနားလည်ပြသသောစကားများကိုသုံးပါ.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုအတှကျအခြိနျအခါ, အဆိုပါ USCIS အရာရှိသငျသညျရရန်စောင့်ဆိုင်းအခန်းတစ်ခန်းထွက်လာကြလိမ့်မည်. အဆိုပါအရာရှိကသင့်ရဲ့နာမကိုအမှီမခေါ်, ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူသို့မဟုတ်သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပေးဦးမည်. အဆိုပါအရာရှိကသင်မေးစေခြင်းငှါ, “နေကောင်းလား?” ကသေးသင့်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကစမ်းသပ်မဟုတ်ပေမယ့်, အရာရှိပြီးသားသင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်နေသည်. ဒါကြောင့်သင်တို့ကဲ့သို့တစ်ခုခုပြောချင်ပါလိမ့်မယ်, “ကျွန်တော်နေကောင်းပါတယ်, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. နေကောင်းလား?” ထိုအခါသင်ကနိုင်ငံသားအဖြစ်အင်တာဗျူးအခန်းအရာရှိကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်.
အားလုံးကတော့သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးအတွက်မေးခွန်းများကိုလူတိုင်းအခြားသူရဲ့မေးခွန်းများကိုအဖြစ်အတိအကျတူညီပါလိမ့်မည်. ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကိုအမြဲအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်. သင်ပင်ထိုင်ခင်မှာ, အဆိုပါ USCIS အရာရှိအမှန်တရားပြောပြရန်ဂတိတော်အဘို့အသင်မေးပါလိမ့်မယ်. သူသို့မဟုတ်သူမပြောပါလိမ့်မယ်, “သင်ယနေ့ငါပေးမည်အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များအမှန်တရားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျိန်ဆိုသို့မဟုတ်အတည်ပြုပါနဲ့, မြေတပြင်လုံးအမှန်တရား, နှင့်အမှန်တရားပေမယ့်ဘာမျှမ?”
အဆိုပါနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်း, အရာရှိကသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစစ်မှန်တဲ့နှင့်မှန်ကန်သေချာအောင်နေသည်. သူသို့မဟုတ်သူမသင့်လျှောက်လွှာအပေါ်အချက်အလက်များအကြောင်းမေးခွန်းတွေအများကြီးမေးဖို့ပါလိမ့်မယ် (Form ကို N-400).
အဆိုပါအရာရှိကသင့်ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းကိုမေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. သူသို့မဟုတ်သူမလျှောက်လွှာပုံစံပေါ်တွင်မဟုတ်ကြကြောင်းမေးခွန်းများမေးစေခြင်းငှါ. ဒီနေရာတွင်ဟုမေးစေခြင်းငှါမေးခွန်းများကိုအချို့အမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်:
သငျသညျအစဉျအမွဲနေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ဖူး? သင်တစ်ဦးပြစ်မှုဆိုင်ရာစံချိန်ရှိသည် Do?
သငျသညျ United States ကိုသစ္စာကျိန်ဆိုပါနဲ့? (သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်ကတိပေးပါနဲ့?)
မင်းတပ်မှာအမှုထမ်းဖူးလား? သငျသညျမူကြမ်းအားဖြင့်စစ်ရေးအတွက်အစေခံရန်လိုအပ်ကြသည်မှန်လျှင်, သငျသညျလို?
မေ့လျော့မနေပါနဲ့! အဆိုပါအရာရှိတစ်ချိန်တည်းမှာသင့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စမ်းသပ်နေသည်. ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေနှင့်သင်နားလည်ကြောင်းပြသ. သငျသညျနားမလညျဘူးဆိုရငျ, ပြောအဆင်ပြေရဲ့, “ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး - သင်မေးခွန်းပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ကျေးဇူးပြု?”
အဆိုပါအရာရှိကသင်ဖတ်မယ့်ဝါကျကိုပြသပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာဖတ်လိုလျှင်, သင်စာဖတ်စမ်းသပ်လေပြီ. သင်ကမှားယွင်းတဲ့အရဆိုပါက, သင်တစ်ဦးဝါကျဖတ်နေမှာနှစ်ခုထက်ပိုသောကြိုးစားပြီးရလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုသာခွင့်သုံးကြိမ်ကြိုးစားပြီးထဲကတဦးတည်းစာဖတ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုရဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
အဆိုပါ ဝေါဟာရစာရင်းဖတ်ရှုခြင်း သင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစမ်းသပ်များ၏အင်္ဂလိပ်စာဖတ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်လေ့လာကူညီပေးပါမည်ဒါဟာစကားသည်သင်ဖတ်ရှုဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ်ပြသ.
သင့်ရဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုစုံစမ်းမည်သောနိုင်ငံသားစမ်းသပ်ဖို့တိုတောင်းတဲ့စာဖြင့်ရေးသားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်. အဆိုပါအရာရှိကိုချရေးဖို့သင်တစ်ဦးဝါကျကိုပြောပါလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာရေးလိုက်ပါလျှင်, သင်အရေးအသားကိုစမ်းသပ်လေပြီ. သင်ကမှားယွင်းတဲ့အရဆိုပါက, သင်တစ်ဦးဝါကျရေးသားခြင်းမှာနှစ်ခုထက်ပိုသောကြိုးစားပြီးရလိမ့်မယ်. သငျသညျကိုသာအရေးအသားကိုစမ်းသပ်သွားတဦးတည်းမှန်ကန်သောဝါကျညာဘက်ရေးသားဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
အဆိုပါ ဝေါဟာရစာရင်းရေးသားခြင်း သငျသညျသဘာဝစမ်းသပ်မှုများ၏အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားဘို့လေ့လာကူညီပေးပါမည်. ဒါဟာသင်ဟုမေးပါလိမ့်မည်ဆိုသောစကားကိုရေးသားဖို့ပြသ.
သင်တို့သည်လည်းအမေရိကန်သမိုင်းနှင့်အစိုးရအပေါ်တစ်ဦးစမ်းသပ်ယူရပါလိမ့်မယ်, နဲ့ Civic. ဒီစာမေးပွဲဖြေဆိုစဉ်ကာလအတွင်း, သငျသညျဖြေဆိုရပါမည်6ထဲက 10 မှန်ကန်စွာယူအက်စ်အေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ. အဆိုပါမေးခွန်းများနှင့်အဖြေကိုပွောဆိုနကွေ. သင့်ရဲ့အဖြေကိုမှန်ကန်သို့မဟုတ်မပါလျှင်အဆိုပါအရာရှိကသင်ပြောပြလိမ့်မယ်. သငျသညျဖြေကြားခဲ့ကြပြီးတာနဲ့6မှန်ကန်စွာမေးခွန်းများကို, အရာရှိမေးခွန်းတွေမေးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သင်စမ်းသပ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွန်သွားပါပြီသင်ပြောပြလိမ့်မယ်.
ဒီမှာ အဆိုပါစာရင်းတစ်ခု 100 တာဝန်ရှိသူတဦးကမေးခွန်းများကို သငျသညျဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. အဆိုပါအရာရှိကကောက်ပါလိမ့်မယ် 10 စာရင်းထဲကမေးခွန်းများကို. အဖြေ၏အချို့, ထိုကဲ့သို့သောသမ္မတ၏အမည်အဖြစ်, သင်သည်သင်၏စမ်းသပ်မှုယူအချိန်မှာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် အဆိုပါစကားကိုနားထောငျ 100 uscis.gov ကနေမှတ်တမ်းတင်အတွက်မေးခွန်းများနှင့်အဖြေကို. သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင် အခြားဘာသာစကားများအတွက်သူတို့ကိုဖတ်ပါ.
အဆိုပါ USCIS ဆွာဟီလီနှင့်ပြင်သစ်အတွက်မေးခွန်းစာရင်းတစ်ခုပေးမထားဘူး. အဆိုပါနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့မေးခွန်းများကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနည်းနည်းပြောင်းလဲပစ်. ဤမေးခွန်းများကို၏အရှိဆုံး updated ဗားရှင်းမဟုတ်. သို့သော်, သူတို့ထဲကအများစုဟာစမ်းသပ်မှုအပေါ်နေဆဲ. သင်တို့သည်ဤလင့်ခ်ကိုသွားပါလိုက်တဲ့အခါ, တစ်ဦးကို PDF file ကိုအလိုအလျှောက် download လုပ်ပါလိမ့်မယ်. မေးခွန်းများကို Download Swahili ထဲတွင် သို့မဟုတ် ပွငျသစျထဲတွင် သို့မဟုတ် ဟိန်ဒီတွင်.
အဆိုပါ USCIS အဖြစ်ပြောင်းလဲအင်တာဗျူးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဗွီဒီယိုတစ်ခု Watch
အာရဗီ USCIS နိုင်ငံသားအဖြစ်စာပမြေားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
တရုတ် USCIS နိုင်ငံသားအဖြစ်စာပမြေားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
ကိုရီးယား USCIS နိုင်ငံသားအဖြစ်စာပမြေားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
စပိန်အတွက် USCIS နိုင်ငံသားအဖြစ်စာပမြေားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
Tagalog တွင် USCIS နိုင်ငံသားအဖြစ်စာပမြေားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
ဗီယကျနမျ USCIS နိုင်ငံသားအဖြစ်စာပမြေားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှလာ USCIS နှင့်အခြားယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.